ျပည္တြင္းသတင္း Archives - Page 14 of 15 - Padaethar
(၇-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီ COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း
၃။ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာေဟာင္း (old confirmed case) မ်ား၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားတြင္ (၂) ႀကိမ္ ဆက္တိုက္ ပိုးမေတြ႕ရွိသူ (၁၂) ဦး (Case- 26, 46, 62, 63, 66, 69, 72, 79, 84, 118, 120, 132) ရွိသျဖင့္ (၇-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔အထိ ပိုးကင္းစင္လာသူ စုစုေပါင္း (၆၂) ဦးရွိပါသည္။
၎တို႔အနက္ (၃၇) ဦးအား ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ အသြားအလာ ဆက္လက္ ကန႔္သတ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိပါသည္။
၃။ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာဟောင်း (old confirmed case) များ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများတွင် (၂) ကြိမ် ဆက်တိုက် ပိုးမတွေ့ရှိသူ (၁၂) ဦး (Case- 26, 46, 62, 63, 66, 69, 72, 79, 84, 118, 120, 132) ရှိသဖြင့် (၇-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ပိုးကင်းစင်လာသူ စုစုပေါင်း (၆၂) ဦးရှိပါသည်။
၎င်းတို့အနက် (၃၇) ဦးအား ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ သတ်မှတ်နေရာများတွင် အသွားအလာ ဆက်လက် ကန့်သတ်၍ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုလျက်ရှိပါသည်။
၁။ (၆-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ညပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာနမွ (ဒုတိအသုတ္) ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့သည့္ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၈၄) ခုတြင္..၊
COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာသစ္ (၁) ဦးေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္ ။
၂။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ (၇-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၇:၀၀)နာရီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ (၁၆၂) ဦးရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္ ။
၃။ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားတြင္ (၂) ႀကိမ္ ဆက္တိုက္ ပိုးမေတြ႕ရွိသူ စုစုေပါင္း (၅၀) ဦး ရွိၿပီး ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေသဆုံးသူ (၆)ဦး ရွိပါသည္ ။
၄။ (၆-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာနမွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၇၈) ခု၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာနမွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၇၂) ခုႏွင့္ အမွတ္ (၂) တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံႀကီး ခုတင္ (၁,၀၀၀) ေနျပည္ေတာ္မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၅၆) ခု၊ စုစုေပါင္း (၄၀၆) ခုတို႔ကို စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။
၁။ (၆-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညပိုင်းတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနမှ (ဒုတိအသုတ်) ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သည့် ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၈၄) ခုတွင်..၊
COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် (၁) ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပါသည် ။
၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ (၇-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၇:၀၀)နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲ အတည်ပြုလူနာ (၁၆၂) ဦးရှိပြီ ဖြစ်ပါသည် ။
၃။ ဓာတ်ခွဲနမူနာများတွင် (၂) ကြိမ် ဆက်တိုက် ပိုးမတွေ့ရှိသူ စုစုပေါင်း (၅၀) ဦး ရှိပြီး ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများအနက် သေဆုံးသူ (၆)ဦး ရှိပါသည် ။
၄။ (၆-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနမှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၇၈) ခု၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၇၂) ခုနှင့် အမှတ် (၂) တပ်မတော်ဆေးရုံကြီး ခုတင် (၁,၀၀၀) နေပြည်တော်မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅၆) ခု၊ စုစုပေါင်း (၄၀၆) ခုတို့ကို စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
လူနာအမှတ် ၁၆၁ ကြောင့် အားလုံးသတိပိုရှိကြရတော့မယ်
Case-161 က ဒလဘက်က အခြေခံလူတန်းစားရပ်ကွက်ထဲကတဲ့။ ထိတွေ့မှုတွေများတယ်လို့ သိရတယ်။ ဆေးရုံမှာ ပထမအကြိမ်စစ်ဆေးမှုက Negative ထွက်ပြီး ဒုတိယအကြိမ်စစ်ဆေးလို့ Positive ထွက်ခဲ့ရာမှ လူနာက ဆေးရုံမှာ မရှိတော့ဘဲ မနည်းလိုက်ရှာဖွေရတယ်တဲ့။
လိပ်စာကိုလည်း လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဆယ်လောက်က နေခဲ့တဲ့ အင်းစိန်လိပ်စာကို ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရှာဖွေတဲ့အခါ ဒလမြို့နယ် အခြေခံလူတန်းစားရပ်ကွက်က ကွမ်းယာဆေးလိပ်ရောင်းသူတစ်ဦးရဲ့နေအိမ်မှာ နေထိုင်သူဖြစ်တယ်တဲ့။
(Update သတင်းအရ ဒလမှာနေတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျောက်တန်းမှာပါတဲ့)
အခုဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ ခရီးသွားရာဇဝင်မရှိ၊ Positive လူနာနဲ့ အဆက်အစပ်မရှိဘဲ ကိုဗစ် ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရသူ (၁၀)ဦးအထက်ရှိလာပါပြီ။ အခုအချိန်မှာလည်း ရန်ကုန်ရဲ့ Community Quarantine ဟာ တစ်လကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် လူတွေဟာ စားဝတ်နေရေးအရ အပြင်ကို ပြန်ထွက်နေကြရပြီ။ အခုလို ဘယ်ကဘယ်လို ကူးစက်မှန်းမသိတဲ့ Local Transmission တွေ ရှိလာချိန်မှာ ကိုယ်တွေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ Silent Carrier တွေ ရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတာ အရမ်းသတိထားရတော့မယ့် အနေအထားပါ။
ရာဇဝင်လိမ်တာ၊ နေရပ်လိပ်စာလိမ်တာတွေဟာ ရောဂါကူးစက်ပျံ့ပွါးမှုကို တားဆီးရာမှာ အတော်ကြီးမားတဲ့ အခက်အခဲပါပဲ။ အခုအချိန်မှာ မြန်မာပြည်မှာ ကိုဗစ် နဲ့ ပတ်သက်ရင် ရောဂါစစ်ဆေးတာ၊ ကုသတာ စားစရိတ်ကအစ အရာရာက အခမဲ့ပါ။ အခုလိုအခြေအနေမှာ ဒီကူးစက်မှု မြန်ဆန်ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါပိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လိမ်လည်တာ၊ ဖုံးကွယ်တာတွေကို ရောဂါကုသပြီးရင် ထိရောက်တဲ့ အပြစ်ပေးမှုတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါပြီ။ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုင်တွယ်သင့်ပါပြီ။
အဖြေမထွက်ခင်မှာ ဆေးရုံက ဆင်းသွားတာမျိုး၊ လိပ်စာအမှန်မပေးခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့် လိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာကို ထပ်မံထိစပ်သူ အများအပြား ရှိလာလိမ့်မယ်။ အဲ့လူတွေကို ထပ်မံ Quarantine ရတဲ့၊ ဆေးစစ်ရတဲ့ အစိုးရကကျခံရတဲ့ စားရိတ်တွေ၊ ထိစပ်သူတွေရဲ့ နစ်နာမှုတွေ အများကြီးပဲ။ ဥပဒေနဲ့ မထိန်းချုပ်နိုင်ရင် နောင်ဆို ပိုဆိုးလာနိုင်တယ်။
Stay Home ကြပါလို့တော့ အတင်းကြီး မပြောရက်တော့ပါဘူး။ တတ်နိုင်သလောက် အိမ်မှာနေကြပါ။ လက်ဆေးပါ။ Mask တပ်ပါ။ လူထူထူကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကြပါ။
ရောဂါပိုးဟာ လက်တစ်ကမ်းအကွာမှာ ဆိုတဲ့သတိနဲ့ ရေရှည်တိုက်ပွဲကို အထိအခိုက်နည်းစွာ ဖြတ်သန်းကြရအောင်…
Stay Strong Stay Home ပါ💪
Case-161 က ဒလဘက္က အေျခခံလူတန္းစားရပ္ကြက္ထဲကတဲ့။ ထိေတြ႕မႈေတြမ်ားတယ္လို႔ သိရတယ္။ ေဆး႐ုံမွာ ပထမအႀကိမ္စစ္ေဆးမႈက Negative ထြက္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္စစ္ေဆးလို႔ Positive ထြက္ခဲ့ရာမွ လူနာက ေဆး႐ုံမွာ မရွိေတာ့ဘဲ မနည္းလိုက္ရွာေဖြရတယ္တဲ့။
လိပ္စာကိုလည္း လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္က ေနခဲ့တဲ့ အင္းစိန္လိပ္စာကို ေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ရွာေဖြတဲ့အခါ ဒလၿမိဳ႕နယ္ အေျခခံလူတန္းစားရပ္ကြက္က ကြမ္းယာေဆးလိပ္ေရာင္းသူတစ္ဦးရဲ့ေနအိမ္မွာ ေနထိုင္သူျဖစ္တယ္တဲ့။
(Update သတင္းအရ ဒလမွာေနတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေက်ာက္တန္းမွာပါတဲ့)
အခုဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာ ခရီးသြားရာဇဝင္မရွိ၊ Positive လူနာနဲ႔ အဆက္အစပ္မရွိဘဲ ကိုဗစ္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရသူ (၁၀)ဦးအထက္ရွိလာပါၿပီ။ အခုအခ်ိန္မွာလည္း ရန္ကုန္ရဲ့ Community Quarantine ဟာ တစ္လေက်ာ္လာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ လူေတြဟာ စားဝတ္ေနေရးအရ အျပင္ကို ျပန္ထြက္ေနၾကရၿပီ။ အခုလို ဘယ္ကဘယ္လို ကူးစက္မွန္းမသိတဲ့ Local Transmission ေတြ ရွိလာခ်ိန္မွာ ကိုယ္ေတြရဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ Silent Carrier ေတြ ရွိေနနိုင္တယ္ဆိုတာ အရမ္းသတိထားရေတာ့မယ့္ အေနအထားပါ။
ရာဇဝင္လိမ္တာ၊ ေနရပ္လိပ္စာလိမ္တာေတြဟာ ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ပြါးမႈကို တားဆီးရာမွာ အေတာ္ႀကီးမားတဲ့ အခက္အခဲပါပဲ။ အခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာျပည္မွာ ကိုဗစ္ နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ေရာဂါစစ္ေဆးတာ၊ ကုသတာ စားစရိတ္ကအစ အရာရာက အခမဲ့ပါ။ အခုလိုအေျခအေနမွာ ဒီကူးစက္မႈ ျမန္ဆန္ျပင္းထန္တဲ့ ေရာဂါပိုးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လိမ္လည္တာ၊ ဖုံးကြယ္တာေတြကို ေရာဂါကုသၿပီးရင္ ထိေရာက္တဲ့ အျပစ္ေပးမႈေတြ ျပဳလုပ္သင့္ပါၿပီ။ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ကိုင္တြယ္သင့္ပါၿပီ။
အေျဖမထြက္ခင္မွာ ေဆး႐ုံက ဆင္းသြားတာမ်ိဳး၊ လိပ္စာအမွန္မေပးခဲ့တာမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ လိုက္လံရွာေဖြေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာကို ထပ္မံထိစပ္သူ အမ်ားအျပား ရွိလာလိမ့္မယ္။ အဲ့လူေတြကို ထပ္မံ Quarantine ရတဲ့၊ ေဆးစစ္ရတဲ့ အစိုးရကက်ခံရတဲ့ စားရိတ္ေတြ၊ ထိစပ္သူေတြရဲ့ နစ္နာမႈေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဥပေဒနဲ႔ မထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရင္ ေနာင္ဆို ပိုဆိုးလာနိုင္တယ္။
Stay Home ၾကပါလို႔ေတာ့ အတင္းႀကီး မေျပာရက္ေတာ့ပါဘူး။ တတ္နိုင္သေလာက္ အိမ္မွာေနၾကပါ။ လက္ေဆးပါ။ Mask တပ္ပါ။ လူထူထူကို တတ္နိုင္သမၽွ ေရွာင္ၾကပါ။
ေရာဂါပိုးဟာ လက္တစ္ကမ္းအကြာမွာ ဆိုတဲ့သတိနဲ႔ ေရရွည္တိုက္ပြဲကို အထိအခိုက္နည္းစြာ ျဖတ္သန္းၾကရေအာင္…
ဆရာဝန္ အျမင္အရ စိုးရိမ္ေရမွတ္နဲ႔ နီးနီးလာၿပီျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္
လူေတြလဲ အရင္လို အမ်ားႀကီး၊ ကားေတြလဲ ျပန္ပိတ္၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ျပန္ထိုင္က်၊ ဆင္‌‌ေျခဖုံးေတြမွာဆို ဘီယာဆိုင္ေတြေတာင္ ေနပူသလိုလိုနဲ႔ ယင္းလိပ္ေလးေတြကာၿပီး ဆိုင္မွာ ျပန္ေသာက္လို႔ရၿပီ။
ဆိုက္ကားဂိတ္ေတြမွာ ေဈးေတြမွာ ျပန္စည္ကားၿပီ။ ရပ္ကြက္လူႀကီးေတြလဲ ေရေႏြးၾကမ္းဝိုင္းနဲ႔ ေအးေအးလူလူဝိုင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးလို႔။
ဒါေပမယ့္ maskကို ေသခ်ာတတ္သူက တစ္ရာမွာ ဆယ္ေယာက္၊ ေနာက္ သုံးဆယ္က ေမးေစ့မွာ၊ ေျခက္ဆယ္ကေတာ့ တပ္ကို မတပ္တာ။ ေအးေလ ဘာတပ္စရာလိုလဲ၊ မြန္းကမြန္းပါဘိသနဲ႔၊ ဒီေလာက္ပူတဲ့ ရာသီဥတုမွာ။
စားဝတ္ေနေရးက ရွိေသးတယ္။ ထြက္ရမွာပဲ။ ဒါက လက္လုပ္လက္စား အေတြး။ အင္းယားကန္သြား၊ အိမ္မွာလူစူ၊ ဝိုင္ဘီယာေသာက္ေနသူေတြက် ဒီ ကိုဗစ္က အဲ့ေလာက္လဲမဆိုးပါဘူးကြာ။
နာမည္ေက်ာ္ေတြေတာင္ အိမ္ျပန္သြားၿပီ။ လူေတြကိုက အေၾကာက္လြန္တာပါ။ လာ မက္ကရိုသြားတိုးမယ္။ အလကား ဒို႔အစိုးရကို အပုတ္ခ်ခ်င္လို႔ အက်ယ္ခ်ဲ႕တာ၊ အခု ဘာျဖစ္လဲ ေအးေဆးပဲကို။ ဒါ လက္မည္းေတြ ေျခာက္ေနတာ။
တကယ္လုပ္ေနတဲ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြကေတာ့ မ်က္ခုံးလႈပ္ေနၿပီ။ ကိုယ့္ အ‌ေျခအေနကိုယ္သိတာကိုး။ ဒါ လက္ကုန္ထုတ္ထားတာ။ ေအာက္က ကိုးနဲ႔ ရွိုးေနရတာဆိုေတာ့။
ေဝဘာဂီမွာ အသက္ရႈစက္နဲ႔ ICU 15 လုံးရွိတယ္။ ေတာင္ဥကၠလာမွာ ICU 15 လုံးရွိတယ္။ ေဖာင္ႀကီးမွာ လက္ရွိ ICU. 10 လုံးရွိတယ္။ ဒါအကုန္ပဲ။ လက္ရွိ။ ေဖာင္ႀကီးက ပိုဆိုးလာရင္ ေနာက္ထပ္ ICU ကုတင္ 30 ထပ္တိုးနိုင္မယ္ ေျပာတယ္။
ရိုးရိုးလူနာအတြက္ ကုတင္ 300 နဲ႔ 400 ၾကားရွိမယ္။
အဲ့ ICU 40 လုပ္နိင္ဖို႔ တျခား ေဆး႐ုံက ေမ့ေဆးဆရာဝန္ေတြကို ဆြဲစိထားရလို႔ ခြဲစိတ္မႈေတြ ရပ္ထားရတယ္။ ရိုးရိုးလူနာေတြလဲ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ေဆး႐ုံေတြ၊ ခြဲခန္းေတြနားထားလို႔ ေတာ္ေတာ္ တိုင္ပတ္ေနၾကၿပီ။
အခု လက္ရွိ လူနာ 150 ေက်ာ္၊ ေသတာ6ေယာက္၊ ICU က ျပန္ေကာင္းတာ2ေယာက္ေလာက္ဆိုေတာ့ လူနာအေယာက္ တစ္ရာမွာ ငါးေယာက္ 5% ICU ေရာက္မယ္ဆိုတဲ့ နိုင္ငံတကာ အခ်ိဳးနဲ႔ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ကြက္တိပဲ။
အဲ့ေတာ့ ျပန္တြက္ရင္ positive 800 တၿပိဳက္နက္ ေဆးရံတက္ရရင္ ICU ျပည့္ၿပီ။ နိုင္ငံတကာကို ျပန္ၾကည့္ရင္ တစ္ေယာက္က တစ္ဆယ္ ၊ တစ္ဆယ္က တစ္ရာျဖစ္ဖို႔သာၾကာတာ၊ တစ္ရာက တစ္ေထာင္ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ ခဏေလး။
တစ္ေထာင္က တစ္ေသာင္းျဖစ္ဖို႔ပိုျမန္၊ တစ္သိန္းက တစ္သန္းျဖစ္ဖို႔ လုံးဝလၽွပ္တျပတ္။ အဲ့ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲတယ္။ တေန႔လုပ္ တေန႔စားမ်ားတယ္။ ထိုင္မစားနိုင္ဘူး။
ဒါမွန္တယ္။ အစိုးရေကာ လူထုေရာ ကၽြန္ေတာ္ေရာ ျမန္ျမန္ပုံမွန္ျဖစ္ခ်င္တာပဲ။ စီးပြားေရးက ခရိုနီကေန သူေတာင္းစား အထိ ထိတယ္။ ျဖစ္သင့္တာကေတာ့ ပိတ္ရင္ ငတ္မယ္။ ဖြင့္ရမယ္။ ဒါလက္ခံတယ္။
ဒါေပမယ့္ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ ဥပေဒ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ေတာ့ လုပ္ဖို႔လိာမယ္။ mask ကို မျဖစ္မေန စနစ္တက် တပ္ခိုင္းရမယ္။ social distancing မျဖစ္မေနလုပ္ရမယ္။
မလိုက္နာရင္ ဒဏ္ရိုက္ရမယ္။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကို ေစာင့္ၾကည့္ ဒဏ္ရိုက္ရမယ္။ esstential ဖြင့္ရမယ္။ non-essential ပိတ္ရမယ္။ လူေတြကို အလကား ဆန္ဆီေဝမယ့္အစား အစိုးရက လူမစုတဲ့ အလုပ္ဒီအခ်ိန္မွာ မ်ားမ်ားေဖာ္ေပးသင့္တယ္။
ဆီေဈးလဲ က်ေနခ်ိန္။ ဥပမာ လမ္းေတြခင္း ၊ ေျမာင္းေဖာ္၊ သန႔္ရွင္းေရး၊ cable ခ်၊ ေဆးသုတ္၊ construction လုပ္ ဒါမ်ိဳးေတြေပါ့ေလ။ အလကားဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ မေကာင္းဘူး။ ေရရွည္မခံဘူး။
စည္းကမ္းက်ပ္က်ပ္မတ္မတ္၊ ခ်ိဳးေဖါက္ရင္ အျပင္းအထန္ အေရးယူဆိုရင္ စီးပြားေရးေလးလဲ ဆက္သြား၊ ေရာဂါေလးလဲ သိပ္မဆိုး ျဖစ္နိုင္ေပမယ့္ ဒီပုံအတိုင္း လူေတြ စားဝတ္ေနေရးဆိုၿပီး
လုပ္ခ်င္တာလုပ္ လႊတ္ထားရင္ေတာ့ ခုန လူနာ 800 ေဆး႐ုံတၿပိဳင္ထဲ တက္ရၿပီဆိုတာနဲ႔ ဘုရားတရားသာ ေအာက္ေမ့ေပေတာ့လို႔ ေျပာရမလို ျဖစ္ေနၿပီ။ အဲ့က် ထိမ္းဖို႔ခက္ၿပီ။ စီးပြားလဲပ်က္ လူလဲေသ။
ဒီ ပို႕က အဆိုးျမင္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က ဆရာဝန္ဆိုေတာ့ ဆရာဝန္ဆိုတာ ဘယ္ျပသနာကိုမဆို ခ်ဥ္းကပ္ရင္ safety first၊ အဆိုးဆုံးေတြကို ျပင္ဆင္၊ အဆိုးဆုံးျဖစ္နိုင္တာေတြ လူနာကိုရွင္းျပေနက်ဆိုေတာ့ နားလည္ေပးၾကပါလို႔။
အဆိုးဆုံးအတြက္ ေကာင္းေကာင္း ျပင္ဆင္လာခဲ့ရင္ ေတာ္ေတာ္ရြဲတဲ့ လူနာ‌ေတာင္ျပန္ေကာင္းတတ္ၿပီး၊ အစကတဲက ေကာင္းတဲ့လူနာ ေအးေဆးပါ၊
ေကာင္းသြားမွာပါဆိုၿပီး ေပါ့ဆရင္ ေနာက္ကေန မ်က္ကလဲဆန္ျပာ ဘယ္ေလာက္လိုက္ရတတ္တယ္ဆိုတာ ဆရာဝန္တိုင္း အသိပါ။
Dr.Myo Thet Aung
ဆရာဝန် အမြင်အရ စိုးရိမ်ရေမှတ်နဲ့ နီးနီးလာပြီဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့
လူတွေလဲ အရင်လို အများကြီး၊ ကားတွေလဲ ပြန်ပိတ်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ပြန်ထိုင်ကျ၊ ဆင်‌‌ခြေဖုံးတွေမှာဆို ဘီယာဆိုင်တွေတောင် နေပူသလိုလိုနဲ့ ယင်းလိပ်လေးတွေကာပြီး ဆိုင်မှာ ပြန်သောက်လို့ရပြီ။
ဆိုက်ကားဂိတ်တွေမှာ ဈေးတွေမှာ ပြန်စည်ကားပြီ။ ရပ်ကွက်လူကြီးတွေလဲ ရေနွေးကြမ်းဝိုင်းနဲ့ အေးအေးလူလူဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးလို့။
ဒါပေမယ့် maskကို သေချာတတ်သူက တစ်ရာမှာ ဆယ်ယောက်၊ နောက် သုံးဆယ်က မေးစေ့မှာ၊ ခြေက်ဆယ်ကတော့ တပ်ကို မတပ်တာ။ အေးလေ ဘာတပ်စရာလိုလဲ၊ မွန်းကမွန်းပါဘိသနဲ့၊ ဒီလောက်ပူတဲ့ ရာသီဥတုမှာ။
စားဝတ်နေရေးက ရှိသေးတယ်။ ထွက်ရမှာပဲ။ ဒါက လက်လုပ်လက်စား အတွေး။ အင်းယားကန်သွား၊ အိမ်မှာလူစူ၊ ဝိုင်ဘီယာသောက်နေသူတွေကျ ဒီ ကိုဗစ်က အဲ့လောက်လဲမဆိုးပါဘူးကွာ။
နာမည်ကျော်တွေတောင် အိမ်ပြန်သွားပြီ။ လူတွေကိုက အကြောက်လွန်တာပါ။ လာ မက်ကရိုသွားတိုးမယ်။ အလကား ဒို့အစိုးရကို အပုတ်ချချင်လို့ အကျယ်ချဲ့တာ၊ အခု ဘာဖြစ်လဲ အေးဆေးပဲကို။ ဒါ လက်မည်းတွေ ခြောက်နေတာ။
အဲ့တော့ ပြန်တွက်ရင် positive 800 တပြိုက်နက် ဆေးရံတက်ရရင် ICU ပြည့်ပြီ။ နိုင်ငံတကာကို ပြန်ကြည့်ရင် တစ်ယောက်က တစ်ဆယ် ၊ တစ်ဆယ်က တစ်ရာဖြစ်ဖို့သာကြာတာ၊ တစ်ရာက တစ်ထောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ခဏလေး။
တစ်ထောင်က တစ်သောင်းဖြစ်ဖို့ပိုမြန်၊ တစ်သိန်းက တစ်သန်းဖြစ်ဖို့ လုံးဝလျှပ်တပြတ်။ အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ဆင်းရဲတယ်။ တနေ့လုပ် တနေ့စားများတယ်။ ထိုင်မစားနိုင်ဘူး။
ဒါမှန်တယ်။ အစိုးရကော လူထုရော ကျွန်တော်ရော မြန်မြန်ပုံမှန်ဖြစ်ချင်တာပဲ။ စီးပွားရေးက ခရိုနီကနေ သူတောင်းစား အထိ ထိတယ်။ ဖြစ်သင့်တာကတော့ ပိတ်ရင် ငတ်မယ်။ ဖွင့်ရမယ်။ ဒါလက်ခံတယ်။
ဒါပေမယ့် စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ဥပဒေ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်တော့ လုပ်ဖို့လိာမယ်။ mask ကို မဖြစ်မနေ စနစ်တကျ တပ်ခိုင်းရမယ်။ social distancing မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်။
မလိုက်နာရင် ဒဏ်ရိုက်ရမယ်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကို စောင့်ကြည့် ဒဏ်ရိုက်ရမယ်။ esstential ဖွင့်ရမယ်။ non-essential ပိတ်ရမယ်။ လူတွေကို အလကား ဆန်ဆီဝေမယ့်အစား အစိုးရက လူမစုတဲ့ အလုပ်ဒီအချိန်မှာ များများဖော်ပေးသင့်တယ်။
ဆီဈေးလဲ ကျနေချိန်။ ဥပမာ လမ်းတွေခင်း ၊ မြောင်းဖော်၊ သန့်ရှင်းရေး၊ cable ချ၊ ဆေးသုတ်၊ construction လုပ် ဒါမျိုးတွေပေါ့လေ။ အလကားဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မကောင်းဘူး။ ရေရှည်မခံဘူး။
စည်းကမ်းကျပ်ကျပ်မတ်မတ်၊ ချိုးဖေါက်ရင် အပြင်းအထန် အရေးယူဆိုရင် စီးပွားရေးလေးလဲ ဆက်သွား၊ ရောဂါလေးလဲ သိပ်မဆိုး ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဒီပုံအတိုင်း လူတွေ စားဝတ်နေရေးဆိုပြီး
လုပ်ချင်တာလုပ် လွှတ်ထားရင်တော့ ခုန လူနာ 800 ဆေးရုံတပြိုင်ထဲ တက်ရပြီဆိုတာနဲ့ ဘုရားတရားသာ အောက်မေ့ပေတော့လို့ ပြောရမလို ဖြစ်နေပြီ။ အဲ့ကျ ထိမ်းဖို့ခက်ပြီ။ စီးပွားလဲပျက် လူလဲသေ။
ဒီ ပို့က အဆိုးမြင်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်က ဆရာဝန်ဆိုတော့ ဆရာဝန်ဆိုတာ ဘယ်ပြသနာကိုမဆို ချဉ်းကပ်ရင် safety first၊ အဆိုးဆုံးတွေကို ပြင်ဆင်၊ အဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်တာတွေ လူနာကိုရှင်းပြနေကျဆိုတော့ နားလည်ပေးကြပါလို့။
အဆိုးဆုံးအတွက် ကောင်းကောင်း ပြင်ဆင်လာခဲ့ရင် တော်တော်ရွဲတဲ့ လူနာ‌တောင်ပြန်ကောင်းတတ်ပြီး၊ အစကတဲက ကောင်းတဲ့လူနာ အေးဆေးပါ၊
ကောင်းသွားမှာပါဆိုပြီး ပေါ့ဆရင် နောက်ကနေ မျက်ကလဲဆန်ပြာ ဘယ်လောက်လိုက်ရတတ်တယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်တိုင်း အသိပါ။
ဒုတိယလိႈင္း ကို ႀကံဳရႏိုင္ေျခရိွ တဲ့ ျမန္မာျပည္ အေျခအေနႏွ င့္ ကို ဗစ္ တေက်ာ႔ ျပန္မလာေ စရန္
ဒုတိယလှိုင်း ကို ကြုံရနိုင်ခြေရှိ တဲ့ မြန်မာပြည် အခြေအနေနှ င့် ကို ဗစ် တကျော့ ပြန်မလာေ စရန်
မြန်မာပြည်တွင် ၂ ရက်အတွင်း ပိုးတွေ့သူ ၁၀ ဦးအထိ ပြန်လည်များပြားလာခဲ့ပီဖြစ်သည်။ ပထမအကြိမ် ပိုးစတွေ့ပီးနောက် ကူးစက်သူများ တရိပ်ရိပ်တက်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကျနော် ထိုစဉ်က ရေးခဲ့သလိုပင် သင်္ကြန်အချိန်အခါသည် မြန်မာပြည်ကို ကယ်တင်ခဲ့သည်။ အင်းစိန်မှ စတင်ပီး ကူးစက်မှုများလာချိန်မှာပင် သင်္ကြန်ပိတ်ရက် ၁၀ ရက်ရောက်ရှိလာသည်။ သင်္ကြန်အကြိုနေ့အထိ ကူးစက်သူများခဲ့ပီး တနေ့ ၂၀ ကျော်ထိ တွေ့ရှိလာစဉ်မှာပင် မြန်မာပြည်သူများ အိမ်ထဲမှာ တပတ်လောက် နေလိုက်ကြသည်။ အမောင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်သည်လဲ အိမ်ထဲပုန်းနေသော လူများကြောင့် မည်သူ့ကူးရမလဲ မသိပဲ ကူးစက်မှုနှုန်းကျဆင်းသွားတော့သည်။ ထိုသင်္ကြန်ကာလက အကျိုးကို ယခုလကုန်ခါနီးအထိ ကျနော်တို့ ခံစားနေရသည်။ ကူးစက်သူ ၁ ဦးခန့်တွေ့လိုက်။ မတွေ့သည့်ရက်များဖြစ်လာလိုက်နှင့် ပထမလှိုင်းကို ကျော်ဖြတ်လာခဲ့သည်။
ယခုအခါ ပြည်တော်ပြန်များနှင့်အတူ ဒုတိယအကြိမ် ကူးစက်မှု(ဒုတိယလှိုင်း) ကြုံရနိုင်ချေရှိလာသည်။ သို့ရာတွင် ကျနော်တို့သည် လက္ခဏာမပြပဲ ပိုးရှိနေသူများကို စုံစမ်းရန်လဲ လိုအပ်နေသေးသည်။ ထို့ကြောင့် ဝန်ကြီးဌာနက ပိုးစစ်သည့်အရေအတွက်တိုးလာရန် ကြိုးစားနေသည်။ သင်္ကြန်ကာလပီးသည့်နောက် ဝမ်းရေးအတွက် လူများအလုပ်လုပ်ကြရသည်။ ထိုသည်ကို နားလည်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့ Silent Carrier များမှ ကူးစက်လာနိုင်ချေ ပိုများလာသည်။ ထို့ကြောင့် ဝမ်းရေးအတွက်လဲ အလုပ်လုပ်ရမည်။ ရောဂါကူးစက်မှုကိုလဲ ကာကွယ်ရမည်ဆိုပါက ဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ ထိုအထဲမှ အရေးအပါဆုံးအချက်များကိုသာ ပြောပါဆိုလျှင် ကျနော်ကတော့ အဓိက ၃ ချက်ကို လိုက်နာရန်ပြောချင်ပါသည်။
၁။ ဝေးဝေးနေပါ (Social Distancing)
အနည်းဆုံး ၆ ပေကွာအောင် နေပါ။ ရောဂါကူးစက်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်သော နိုင်ငံများသည် Social Distancing ကို လိုက်နာကြသည်။ အလုပ်ထဲ စျေးထဲ အိမ်ထဲ နေရာတိုင်းတွင် ကွာအောင်နေပါ။ တချို့က အလုပ်သွားပြန်ရာတွင် YBS များ မြို့ပတ်ရထားများဖြင့် ပြန်ရသူများရှိသည်။ ကွာအောင် မနေနိုင်လျှင် Mask တပ်ပါ။ ရထားပေါ် ကားပေါ်မှ စတင်၍ လက်ကို မျက်နှာကို လုံးဝမထိပါနဲ့။ သတ်မှတ်နေရာရောက်ရင် လက်ဆေးပါ။
၂။ Mask တပ်ပါ
ယခုအခါ လူအများ ကားလေးများဖြင့် အပြင်ထွက်နေကြသည်ကို အလျိုလျို မြင်နေရသည်။ တချို့က Mask မတပ်ကြပါ။ ကားပေါ်က ဆင်းလျှင်တော့ မပြောတတ်။ မည်သို့ဆိုစေ Mask တပ်ကြပါ။ Mask တပ်ခြင်းသည် ကူးစက်နိုင်ခြင်းကို လျှော့ချစေသည်။ ထို့ကြောင့် အပြင်ထွက်လျှင် Mask တပ်ပါ။ စည်းကမ်းတကျတပ်ဆင်ပါ။ သေချာစွန့်ပစ်ပါ။
အပြင်က အိမ်ပြန်ရောက်သည်ဖြစ်စေ။ အလုပ်ထဲရောက်သည်ဖြစ်စေ လက်ကို ဆပ်ပြာဖြင့် ဆေးပါ။ ရေမဆေးနို်င်လျှင် လက်သန့်စင်ဆေးဖြင့် ဆေးပါ။ ထို ၃ချက်ကို လိုက်နာလျှင် အကျိုးရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စတင်ဖြစ်ပွားစဉ်က ဂရုတစိုက်ကာကွယ်ကြသော်လည်း ယခုအခါ အနည်းငယ်ပေါ့ဆလာကြသည်ကို တွေ့နေရသည်။ ထို့ကြောင့် အလုပ်သွားနေရပီဆိုသော်လည်း မပေါ့ဆကြပါနဲ့။ ယခုတကြိမ်ကို ထပ်မံကျော်လွှားနိုင်လျှင် အဆင်ပြေပီဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာမြေကို ကာကွယ်ရန် အမိမြေကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်ဖို့ ဦးစွာလိုအပ်နေပီဖြစ်သည်။ အားလုံး အတူတကွ အသက်မဆုံးရှုံးကြပဲ ကျော်ဖြတ်နိုင်ကြရန် အထူးဆင်ခြင်သင့်ပါ။
ဂရုပြုသင့်သည့် အချိန်သည် ယခုတဖန် ရောက်ရှိလာပါပီ။ ရောဂါပိုးအတွေ့များသော ဒေသများမှ ပြည်သူများက ပို၍ ဂရုပြုကြပါ။ လူနာအများဆုံးတွေ့နေရသော အင်းစိန်မြို့နယ်ကို မကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်း ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ အထူးအရှိန်မြင့်ပီး ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားပီဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်သည့်အချိန်တွင် ပြည်သူများက ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ အားလုံး လက်တွဲညီညီ ကြိုးစားနိုင်မှ ဤကပ်ဘေးကြီးကို ကျော်လွှားနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
ဒုတိယ အကြိမ် Q-Camp…
ပြည်တော်ပြန်တွေ ရဲ့ privacy ကိုထိမ်းတဲ့အနေ နဲ့ ဓါတ်ပုံ မရိုက်ရန် volunteer များကို ပြောထားသော်လည်း Q ဝင်မယ့်သူတွေက selfie ရိုက်တဲ့သူရိုက်၊ live လွှင့်တဲ့သူလွှင့်ဆိုတော့ စစချင်းတော့ စိတ်ထဲတစ်မျိုးဖြစ်မိတယ်။ သေချာစုံစမ်းကြည့်မှ အကြောင်းရင်းသိရတယ်။
သူတို့အတွေးက သူတို့ကိုယ့်နိုင်ငံပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုကြိုဆိုတယ် ဆိုတာပြချင်တာ။ သူတို့နေခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ခုလိုမျိုးမပြောနဲ့ ဖျားရင်တောင် မကြည့်ပေးပါဘူးတဲ့၊။ positive ဖြစ်တဲ့သူတွေတောင် အိမ်ထဲမှာပဲ lock down နေရပါတယ်တဲ့။ အသက်ရှူရခက်ခဲတဲ့ လက္ခဏာတွေပေါ်လာမှ ဆေးရုံနဲ့ ဆက်သွယ်ရပါသတဲ့။
ခုလိုအခြေအနေမျိုး နဲ့ ကြိုဆိုတာကို နိုင်ငံတကာ ကို ပြချင်လို့ ရိုက်ကြတာပါတဲ့။
သဲအင်းဂူဆရာတော်ဘုရား ရဲ့ မေတ္တာအရိပ်အောက်က စေတနာတွေ ကို သိစေချင်တာတဲ့။
ဒီမနက် ရောက်ကာစမို့ လိုအပ်ချက်တွေသည်းခံပေးပါလို့ လိုက်ပြောတော့ အများစုက complaint မတက်ကြဘူး။ ဒီလောက်လုပ်ပေးနေတာကိုတောင် ကျေးဇူးတင်လို့တဲ့ လက်အုပ်လေးတွေချီလို့။
ထို့ကြောင့် မြန်မာ ဟုခေါ်သည်…
ချစ်သော K Mask (သဲအင်းဂူ Q-Camp)
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ ဟုေခၚသည္ သဲအင္းဂူက ညေန တစ္ခု အစျပဳၿပီ
ဒုတိယ အႀကိမ္ Q-Camp…
ျပည္ေတာ္ျပန္ေတြ ရဲ႕ privacy ကိုထိမ္းတဲ့အေန နဲ႔ ဓါတ္ပုံ မ႐ိုက္ရန္ volunteer မ်ားကို ေျပာထားေသာ္လည္း Q ဝင္မယ့္သူေတြက selfie ႐ိုက္တဲ့သူ႐ိုက္၊ live လႊင့္တဲ့သူလႊင့္ဆိုေတာ့ စစခ်င္းေတာ့ စိတ္ထဲတစ္မ်ိဳးျဖစ္မိတယ္။ ေသခ်ာစုံစမ္းၾကည့္မွ အေၾကာင္းရင္းသိရတယ္။
သူတို႔အေတြးက သူတို႔ကိုယ့္ႏိုင္ငံျပန္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုႀကိဳဆိုတယ္ ဆိုတာျပခ်င္တာ။ သူတို႔ေနခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ခုလိုမ်ိဳးမေျပာနဲ႔ ဖ်ားရင္ေတာင္ မၾကည့္ေပးပါဘူးတဲ့၊။ positive ျဖစ္တဲ့သူေတြေတာင္ အိမ္ထဲမွာပဲ lock down ေနရပါတယ္တဲ့။ အသက္ရႉရခက္ခဲတဲ့ လကၡဏာေတြေပၚလာမွ ေဆး႐ုံနဲ႔ ဆက္သြယ္ရပါသတဲ့။
ခုလိုအေျခအေနမ်ိဳး နဲ႔ ႀကိဳဆိုတာကို ႏိုင္ငံတကာ ကို ျပခ်င္လို႔ ႐ိုက္ၾကတာပါတဲ့။
သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ဘုရား ရဲ႕ ေမတၱာအရိပ္ေအာက္က ေစတနာေတြ ကို သိေစခ်င္တာတဲ့။
ဒီမနက္ ေရာက္ကာစမို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြသည္းခံေပးပါလို႔ လိုက္ေျပာေတာ့ အမ်ားစုက complaint မတက္ၾကဘူး။ ဒီေလာက္လုပ္ေပးေနတာကိုေတာင္ ေက်းဇူးတင္လို႔တဲ့ လက္အုပ္ေလးေတြခ်ီလို႔။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ ဟုေခၚသည္…
ခ်စ္ေသာ K Mask (သဲအင္းဂူ Q-Camp)
ယေန႔ ည (၈:၀၀)နာရီ COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း
May 3, 2020 by Padaethar
(၃-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီ
၁။ (၃-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေနပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ (ပထမအသုတ္) စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ေသာ ….
ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၆၃) ခုႏွင့္ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန မွ စစ္ေဆး ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၆၀) ခု၊ စုစုေပါင္း (၁၂၃) ခုတြင္ -COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာသစ္ (၄) ဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။
၃။ (၃-၅-၂၀၂၀) ရက္ေန႔အထိ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာေဟာင္း (old confirmed case) မ်ား၏ဓာတ္ခြဲနမူနာစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ (၂) ႀကိမ္ ဆက္တိုက္အျဖစ္ ပိုးမေတြ႕ရွိသူ စုစုေပါင္း (၄၃) ဦးရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။
၎တို႔အနက္ (၂၉) ဦးမွာ ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ ရရွိၿပီးျဖစ္ကာ ၎တို႔အား သတ္မွတ္ ေနရာမ်ားတြင္ အသြားအလာ ဆက္လက္ကန႔္သတ္ထားရွိပါသည္။
(၃-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ
၁။ (၃-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေပိုင်းတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) မှ (ပထမအသုတ်) စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ….
ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆၃) ခုနှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန မှ စစ်ဆေး ပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆၀) ခု၊ စုစုပေါင်း (၁၂၃) ခုတွင် -COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် (၄) ဦး တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
၃။ (၃-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာဟောင်း (old confirmed case) များ၏ဓာတ်ခွဲနမူနာစစ်ဆေးမှုများတွင် (၂) ကြိမ် ဆက်တိုက်အဖြစ် ပိုးမတွေ့ရှိသူ စုစုပေါင်း (၄၃) ဦးရှိပြီဖြစ်ပါသည်။
၎င်းတို့အနက် (၂၉) ဦးမှာ ဆေးရုံမှဆင်းခွင့် ရရှိပြီးဖြစ်ကာ ၎င်းတို့အား သတ်မှတ် နေရာများတွင် အသွားအလာ ဆက်လက်ကန့်သတ်ထားရှိပါသည်။
ထီထိုးႏိုင္ဖို႔ အေႂကြးစနစ္နဲ႔ လုပ္ေပးတဲ့ အလုပ္ရွင္လဲ ဝမ္းသာအလုပ္သမေတြလဲ ဝမ္းသာရတာေပါ့…
အလုပ္ရွင္မွ ကြမ္းသီးပြဲ႐ုံအလုပ္သမေတြကို ထီဖိုးေငြစိုက္ထားေပးၿပီး အဆင္ေျပမွ အရစ္က် ျပန္ဆပ္စနစ္ျဖင့္ ထီထိုးေပးရာမွ သိန္း(၁၀၀)ဆုေပါက္
သိန္း(၁၀၀)ကံထူးရွင္ကေတာ့ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕သီရိၿမိဳင္(၁၂)လမ္းမွ မစန္းစန္းႏြယ္ ျဖစ္ပါတယ္။
သူမ အလုပ္လုပ္တဲ့ အလုပ္႐ုံကေတာ့ ေမာ္လၿမိဳင္ စမ္းႀကီးရပ္မွ ဦးေနဝင္းသူရဲ႕ (NWT)ကြမ္းသီးပြဲ႐ုံ ျဖစ္ပါတယ္။
ပြဲ႐ုံအလုပ္သမေလးေတြက ထီတေစာင္(၁၀၀၀) ေပးထိုးဖို႔ေတာ္ေတာ္ စဥ္းစားရတဲ့ အေျခအေနပါ။
မိသားစု စားဝတ္ေနေရးရွိေနေတာ့ ထီတေစာင္(၁၀၀၀) ထိုးဖို႔ထက္ အိမ္အတြက္ဆန္ (၁၀၀၀) ဖိုး ဝယ္ျဖည့္လိုက္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။
အဲဒီအတြက္ အလုပ္ရွင္ ဦးေနဝင္းသူ နဲ႕ အလုပ္႐ုံတာဝန္ခံမွ ကြမ္းသီးပြဲ႐ုံ အလုပ္သမေလးေတြရဲ႕ကံစမ္းခ်င္တဲ့ဆႏၵလဲျပည့္ေအာင္ အခက္အခဲလဲမျဖစ္ေအာင္ ေစ်းႀကိဳထီဆိုင္မွ ထီေတြကိုဝယ္ယူေပးၿပီး….
အလုပ္သမေတြ အဆင္ေျပမွ အရစ္က်ျပန္ဆပ္ဆိုၿပီး တစ္ဦးကို ထီ(၂)ေစာင္ႏႈန္း အေႂကြးထိုးေပးေစရာမွ မစန္းစန္းႏြယ္ ဆိုတဲ့ အလုပ္သမတစ္ဦးမွ သိန္း(၁၀၀) ကံထူးသြားတာျဖစ္ပါတယ္။
သိန္း(၁၀၀) ကံထူးရွင္ မစန္းစန္းႏြယ္ မွလည္း ဆုေငြထုတ္ၿပီးရင္ ဘဝတူ အလုပ္သမေလးေတြကို တတ္နိုင္သေလာက္ ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးပါဦးမည္တဲ့ခင္ဗ်…
တကယ္မရွိတဲ့ လက္လုပ္လက္စားေတြ ေပါက္တာ ကိုယ္ထီေပါက္တာထက္ေတာင္ ပိုဝမ္းသာမိပါတယ္ဗ်ာ ……။Credit – Zin Moe
ေမာ္လၿမိဳင္ စမ္းႀကီးရပ္ ေနဝင္းသူ(NWT) ကြမ္းသီးပြဲ႐ုံက သိန္း(၁၀၀)အျပင္ ေနာက္ထပ္ကံထူးရွင္ေတြ ထပ္မံထြက္ေပၚ။
၅ ေသာင္းဆု(၂)ဆု ထပ္ေပါက္။ ကံထူးရွင္က မထက္နႏၵာ တဲ့။
ထီထိုးႏိုင္ဖို႔ အေႂကြးစနစ္နဲ႔ လုပ္ေပးတဲ့ အလုပ္ရွင္လဲ ဝမ္းသာအလုပ္သမေတြလဲ ဝမ္းသာရတာေပါ့။
အလုပ်ရှင်မှ ကွမ်းသီးပွဲရုံအလုပ်သမတွေကို ထီဖိုးငွေစိုက်ထားပေးပြီး အဆင်ပြေမှ အရစ်ကျ ပြန်ဆပ်စနစ်ဖြင့် ထီထိုးပေးရာမှ သိန်း(၁၀၀)ဆုပေါက်
သိန်း(၁၀၀)ကံထူးရှင်ကတော့ မော်လမြိုင်မြို့သီရိမြိုင်(၁၂)လမ်းမှ မစန်းစန်းနွယ် ဖြစ်ပါတယ်။
သူမ အလုပ်လုပ်တဲ့ အလုပ်ရုံကတော့ မော်လမြိုင် စမ်းကြီးရပ်မှ ဦးနေဝင်းသူရဲ့ (NWT)ကွမ်းသီးပွဲရုံ ဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲရုံအလုပ်သမလေးတွေက ထီတစောင်(၁၀၀၀) ပေးထိုးဖို့တော်တော် စဉ်းစားရတဲ့ အခြေအနေပါ။
မိသားစု စားဝတ်နေရေးရှိနေတော့ ထီတစောင်(၁၀၀၀) ထိုးဖို့ထက် အိမ်အတွက်ဆန် (၁၀၀၀) ဖိုး ဝယ်ဖြည့်လိုက်ကြတာ များပါတယ်။
အဲဒီအတွက် အလုပ်ရှင် ဦးနေဝင်းသူ နဲ့ အလုပ်ရုံတာဝန်ခံမှ ကွမ်းသီးပွဲရုံ အလုပ်သမလေးတွေရဲ့ကံစမ်းချင်တဲ့ဆန္ဒလဲပြည့်အောင် အခက်အခဲလဲမဖြစ်အောင် ဈေးကြိုထီဆိုင်မှ ထီတွေကိုဝယ်ယူပေးပြီး….
အလုပ်သမတွေ အဆင်ပြေမှ အရစ်ကျပြန်ဆပ်ဆိုပြီး တစ်ဦးကို ထီ(၂)စောင်နှုန်း အကြွေးထိုးပေးစေရာမှ မစန်းစန်းနွယ် ဆိုတဲ့ အလုပ်သမတစ်ဦးမှ သိန်း(၁၀၀) ကံထူးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
သိန်း(၁၀၀) ကံထူးရှင် မစန်းစန်းနွယ် မှလည်း ဆုငွေထုတ်ပြီးရင် ဘဝတူ အလုပ်သမလေးတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ကူညီထောက်ပံ့ ပေးပါဦးမည်တဲ့ခင်ဗျ…
တကယ်မရှိတဲ့ လက်လုပ်လက်စားတွေ ပေါက်တာ ကိုယ်ထီပေါက်တာထက်တောင် ပိုဝမ်းသာမိပါတယ်ဗျာ ……။Credit – Zin Moe
မော်လမြိုင် စမ်းကြီးရပ် နေဝင်းသူ(NWT) ကွမ်းသီးပွဲရုံက သိန်း(၁၀၀)အပြင် နောက်ထပ်ကံထူးရှင်တွေ ထပ်မံထွက်ပေါ်။
၅ သောင်းဆု(၂)ဆု ထပ်ပေါက်။ ကံထူးရှင်က မထက်နန္ဒာ တဲ့။
ထီထိုးနိုင်ဖို့ အကြွေးစနစ်နဲ့ လုပ်ပေးတဲ့ အလုပ်ရှင်လဲ ဝမ်းသာအလုပ်သမတွေလဲ ဝမ်းသာရတာပေါ့။
ထီလက္မွတ္မ်ား လြင့္မပစ္ၾကပါနဲ႔အုံး…(၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္တြင္ မေရာင္းရထီလက္မွတ္မ်ား ဆုမဲျပန္လည္ခြဲေဝေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္…
(၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္တြင္ ေဝေဝဆာဆာဆုမဲစနစ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ မေရာင္းရထီလက္မွတ္မ်ား၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးအား ဆုမဲျပန္လည္ခြဲေဝေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ (၅ )ဆု ၊ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ (၅ )ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၅၀၀(၅ )ဆု ၊ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ (၁)ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၅၀ (၁)ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၂၀ (၁) ဆု ျဖစ္ပါတယ္။
#သိန္း ၂၀၀၀ (၅)ဆု
#သိန္း ၁၀၀၀( ၅) ဆု
#သိန္း ၅၀၀ ( ၅) ဆု
#သိန္း ၂၀၀ ( ၁ ) ဆု
#သိန္း ၅၀ (၁) ဆု
#သိန္း ၂၀ ( ၁ ) ဆု
ဘဏၰာ သိမ္းေငြ က်ပ္သန္း ၂၅၀ မွ ၁၀ သိန္း ၄ ဆု ၃ သိန္း ၂ ယူနစ္ ၂ သိန္း ၂ ယူနစ္ ၁ သိန္း ၂ ယူ နစ္ ဖြင့္ေပးရန္က်န္ရွိပါေသးသည္။
#က်ပ္၁၀ သိန္း (၄)ဆု
#ေဝေဝဆာဆာက်ပ္ ၃ သိန္းဆု
#ေဝေဝဆာဆာက်ပ္ ၂ သိန္းဆု
#ေဝေဝဆာဆာက်ပ္ ၁ သိန္းဆု
မိမိမိတ္ေဆြမ်ား သိေအာင္ ရွဲယ္ေပးၾကပါ…။credit ညီနနၵ
(၁၅) ကြိမ်မြောက်တွင် ဝေဝေဆာဆာဆုမဲစနစ်မှ ထွက်ပေါ်လာသော မရောင်းရထီလက်မှတ်များ၏ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးအား ဆုမဲပြန်လည်ခွဲဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျပ်သိန်း ၂၀၀၀ (၅ )ဆု ၊ ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ (၅ )ဆု၊ ကျပ်သိန်း ၅၀၀(၅ )ဆု ၊ ကျပ်သိန်း ၂၀၀ (၁)ဆု၊ ကျပ်သိန်း ၅၀ (၁)ဆု၊ ကျပ်သိန်း ၂၀ (၁) ဆု ဖြစ်ပါတယ်။
#သိန်း ၂၀၀၀ (၅)ဆု
#သိန်း ၁၀၀၀( ၅) ဆု
#သိန်း ၅၀၀ ( ၅) ဆု
#သိန်း ၂၀၀ ( ၁ ) ဆု
#သိန်း ၅၀ (၁) ဆု
#သိန်း ၂၀ ( ၁ ) ဆု
ဘဏ္ဏာ သိမ်းငွေ ကျပ်သန်း ၂၅၀ မှ ၁၀ သိန်း ၄ ဆု ၃ သိန်း ၂ ယူနစ် ၂ သိန်း ၂ ယူနစ် ၁ သိန်း ၂ ယူ နစ် ဖွင့်ပေးရန်ကျန်ရှိပါသေးသည်။
#ကျပ်၁၀ သိန်း (၄)ဆု
#ဝေဝေဆာဆာကျပ် ၃ သိန်းဆု
#ဝေဝေဆာဆာကျပ် ၂ သိန်းဆု
#ဝေဝေဆာဆာကျပ် ၁ သိန်းဆု
မိမိမိတ်ဆွေများ သိအောင် ရှဲယ်ပေးကြပါ…။credit ညီနန္ဒ
၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္ စ/ဆံုး ထြက္ပါျပီ…ထီတိုက္လို႔ရပါျပီဗ်ာ…
၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္ စ/ဆံုး(ဒီေန႔မွ ဂဏန္းအကုန္ထြက္လာတာပါ)
ပထမေန႔ ဒုတိယေန႔ ေအာင္ဘာေလထီ ေပါက္ဂဏန္းမ်ား စုစညိးတင္ျပေပးလိုက္ပါသည္
(၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆု ဖြင့္ပြဲ ထီေပါက္စဥ္ ပထမေန႔ ဆုမဲမ်ား
သိန္း ၁၅၀၀၀ ဆု စ ၄၄၁၇၉၈
သိန္း ၁၀၀၀၀ ဆု ည ၅၅၈၀၀၄
သိန္း ၅၀၀၀ ဆု ဌ ၆၃၂၀၄၄
သိန္း ၂၀၀၀ ဆု ကဃ ၅၅၃၂၂၄
သိန္း ၂၀၀၀ ဆု ဆ ၆၂၉၀၉၅
သိန္း ၁၀၀၀ ဆု ည ၂၃၁၁၄၅
သိန္း ၁၀၀၀ ဆု ဝ ၉၈၄၀၂၀
က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆု ( ၁၀ ) ဆု
သိန္း ၅၀၀ ဟ ၁၁၈၅၅၆.
သိန္း ၅၀၀. ည ၆၆၃၇၆၇
သိန္း ၅၀၀. ဆ ၄၇၇၆၈၆
သိန္း ၅၀၀. ဠ ၅၅၄၂၇၅
သိန္း ၅၀၀. ည ၅၃၂၆၂၀
သိန္း ၅၀၀. ကင ၂၆၇၅၄၅
သိန္း ၅၀၀. မ ၅၀၄၁၄၆
သိန္း ၅၀၀. က ၇၄၁၁၆၃
သိန္း ၅၀၀. ကဂ ၆၅၅၄၁၉
သိန္း ၅၀၀. ဋ ၆၂၃၀၉၀
က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ဆု ( ၁၁ ) ဆု
သိန္း ၂၀၀. ဗ ၂၅၄၀၇၅
သိန္း ၂၀၀. ကဂ ၄၂၉၉၀၂
သိန္း ၂၀၀. င ၇၅၁၇၄၁
သိန္း ၂၀၀. ဃ ၆၁၈၈၀၉
သိန္း ၂၀၀. ဋ ၉၀၈၉၀၅.
သိန္း ၂၀၀. ဏ ၈၇၆၇၅၅
သိန္း ၂၀၀. ခ ၅၂၃၇၂၃
သိန္း ၂၀၀. လ ၂၄၀၉၀၅
သိန္း ၂၀၀. ကဂ ၆၆၀၉၅၇
သိန္း ၂၀၀. ဆ ၄၁၅၄၅၁
သိန္း ၂၀၀. န ၁၃၉၁၁၈
က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆု ( ၁၂ ) ဆု
သိန္း ၁၀၀. ဌ ၇၈၂၂၆၈.
သိန္း ၁၀၀. ဘ ၇၄၅၃၄၆
သိန္း ၁၀၀. ယ ၆၅၆၁၃၄
သိန္း ၁၀၀. စ ၇၆၆၅၃၁
သိန္း ၁၀၀. ကဂ ၉၆၁၁၇၈
သိန္း ၁၀၀. အ ၉၂၈၇၄၉
သိန္း ၁၀၀. န ၁၁၃၈၇၀
သိန္း ၁၀၀. ဒ ၁၅၄၂၀၃
သိန္း ၁၀၀. ဇ ၉၁၉၇၇၁
သိန္း ၁၀၀. ဌ ၉၉၇၄၀၃
သိန္း ၁၀၀. ကခ ၃၁၁၇၀၁
သိန္း ၁၀၀. ဌ ၆၉၂၇၈၂
က်ပ္သိန္း ၅၀ ဆု ( ၁၂ ) ဆု
သိန္း ၅၀. ထ ၃၇၂၃၅၁.
သိန္း ၅၀. ဈ ၉၆၀၅၇၅
သိန္း ၅၀. စ ၉၃၈၈၀၈.
သိန္း ၅၀. ဏ ၇၇၂၃၁၅.
သိန္း ၅၀ ဈ ၈၃၄၈၄၀
သိန္း ၅၀. ကခ ၅၆၂၁၂၃
သိန္း ၅၀. ဇ ၇၀၀၅၂၂.
သိန္း ၅၀. ဇ ၃၂၆၅၂၇
သိန္း ၅၀. ထ ၆၈၁၁၆၈
သိန္း ၅၀. ဓ ၆၇၁၆၇၂
သိန္း ၅၀ ပ ၈၈၀၇၆၅
သိန္း ၅၀. ဎ ၈၀၃၅၇၆
က်ပ္သိန္း ၂၀ဆု ( ၁၅ ) ဆု
သိန္း ၂၀. ကခ ၅၃၈၀၃၉
သိန္း ၂၀. န ၃၄၂၀၇၉.
သိန္း ၂၀. ကက ၈၂၇၉၈၃
သိန္း ၂၀. သ ၃၃၅၅၀၆
သိန္း ၂၀. ဟ ၅၃၃၉၇၀
သိန္း ၂၀. ကဂ ၁၉၃၁၃၃
သိန္း ၂၀. အ ၅၃၆၆၀၂
သိန္း ၂၀. ဃ ၂၆၅၅၃၂.
သိန္း ၂၀. ထ ၄၆၆၃၀၅
သိန္း ၂၀. မ ၇၆၇၈၃၄
သိန္း ၂၀. ည ၈၀၉၅၅၄.
သိန္း ၂၀. ဒ ၄၈၆၅၇၁
သိန္း ၂၀. ကင ၆၈၄၉၁၇
သိန္း ၂၀. ဖ ၇၆၁၃၁၃
သိန္း ၂၀. ရ ၅၂၉၀၁၃
ထီဖြင့္ပြဲ ဒုတိယေန႔ ဆုမဲမ်ား
က်ပ္ (၁၀) သိန္းဆု (၁၆) ဆု
၁၀ သိန္း ဎ ၉၁၄၁၉၈.
၁၀ သိန္း ဈ ၄၈၂၉၆၃.
၁၀ သိန္း ရ ၃၈၆၄၇၉
၁၀ သိန္း ဌ ၉၆၆၀၃၄
၁၀ သိန္း ကဃ ၁၈၇၃၇၂
၁၀ သိန္း ဓ ၇၀၁၃၃၄
၁၀ သိန္း သ ၃၀၁၅၀၅
၁၀ သိန္း ဇ ၇၄၄၄၅၀
၁၀ သိန္း ဒ ၄၅၂၈၂၃
၁၀ သိန္း န ၁၇၄၅၆၃
၁၀ သိန္း ဓ ၈၂၅၁၂၃
၁၀ သိန္း ကခ ၂၈၇၈၁၆.
၁၀ သိန္း ဗ ၄၄၅၀၇၀
၁၀ သိန္း ဠ ၆၆၉၀၇၀
၁၀ သိန္း ဂ ၉၃၄၉၄၀.
၁၀ သိန္း ဘ ၄၇၈၄၇၃
ေဝေဝဆာဆာ ပေဒသာ (၃) သိန္းဆု
ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၂ သိန္းဆုမ်ား
ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၁ သိန္းဆုမ်ား
ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား
၁၅ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် စ/ဆုံး(ဒီနေ့မှ ဂဏန်းအကုန်ထွက်လာတာပါ)
ပထမနေ့ ဒုတိယနေ့ အောင်ဘာလေထီ ပေါက်ဂဏန်းများ စုစညိးတင်ပြပေးလိုက်ပါသည်
(၁၅) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းဆု ဖွင့်ပွဲ ထီပေါက်စဉ် ပထမနေ့ ဆုမဲများ
သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆု စ ၄၄၁၇၉၈
သိန်း ၁၀၀၀၀ ဆု ည ၅၅၈၀၀၄
သိန်း ၅၀၀၀ ဆု ဌ ၆၃၂၀၄၄
သိန်း ၂၀၀၀ ဆု ကဃ ၅၅၃၂၂၄
သိန်း ၂၀၀၀ ဆု ဆ ၆၂၉၀၉၅
သိန်း ၁၀၀၀ ဆု ည ၂၃၁၁၄၅
သိန်း ၁၀၀၀ ဆု ဝ ၉၈၄၀၂၀
ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ဆု ( ၁၀ ) ဆု
သိန်း ၅၀၀ ဟ ၁၁၈၅၅၆.
သိန်း ၅၀၀. ည ၆၆၃၇၆၇
သိန်း ၅၀၀. ဆ ၄၇၇၆၈၆
သိန်း ၅၀၀. ဠ ၅၅၄၂၇၅
သိန်း ၅၀၀. ည ၅၃၂၆၂၀
သိန်း ၅၀၀. ကင ၂၆၇၅၄၅
သိန်း ၅၀၀. မ ၅၀၄၁၄၆
သိန်း ၅၀၀. က ၇၄၁၁၆၃
သိန်း ၅၀၀. ကဂ ၆၅၅၄၁၉
သိန်း ၅၀၀. ဋ ၆၂၃၀၉၀
ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ဆု ( ၁၁ ) ဆု
သိန်း ၂၀၀. ဗ ၂၅၄၀၇၅
သိန်း ၂၀၀. ကဂ ၄၂၉၉၀၂
သိန်း ၂၀၀. င ၇၅၁၇၄၁
သိန်း ၂၀၀. ဃ ၆၁၈၈၀၉
သိန်း ၂၀၀. ဋ ၉၀၈၉၀၅.
သိန်း ၂၀၀. ဏ ၈၇၆၇၅၅
သိန်း ၂၀၀. ခ ၅၂၃၇၂၃
သိန်း ၂၀၀. လ ၂၄၀၉၀၅
သိန်း ၂၀၀. ကဂ ၆၆၀၉၅၇
သိန်း ၂၀၀. ဆ ၄၁၅၄၅၁
သိန်း ၂၀၀. န ၁၃၉၁၁၈
ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဆု ( ၁၂ ) ဆု
သိန်း ၁၀၀. ဌ ၇၈၂၂၆၈.
သိန်း ၁၀၀. ဘ ၇၄၅၃၄၆
သိန်း ၁၀၀. ယ ၆၅၆၁၃၄
သိန်း ၁၀၀. စ ၇၆၆၅၃၁
သိန်း ၁၀၀. ကဂ ၉၆၁၁၇၈
သိန်း ၁၀၀. အ ၉၂၈၇၄၉
သိန်း ၁၀၀. န ၁၁၃၈၇၀
သိန်း ၁၀၀. ဒ ၁၅၄၂၀၃
သိန်း ၁၀၀. ဇ ၉၁၉၇၇၁
သိန်း ၁၀၀. ဌ ၉၉၇၄၀၃
သိန်း ၁၀၀. ကခ ၃၁၁၇၀၁
သိန်း ၁၀၀. ဌ ၆၉၂၇၈၂
ကျပ်သိန်း ၅၀ ဆု ( ၁၂ ) ဆု
သိန်း ၅၀. ထ ၃၇၂၃၅၁.
သိန်း ၅၀. ဈ ၉၆၀၅၇၅
သိန်း ၅၀. စ ၉၃၈၈၀၈.
သိန်း ၅၀. ဏ ၇၇၂၃၁၅.
သိန်း ၅၀ ဈ ၈၃၄၈၄၀
သိန်း ၅၀. ကခ ၅၆၂၁၂၃
သိန်း ၅၀. ဇ ၇၀၀၅၂၂.
သိန်း ၅၀. ဇ ၃၂၆၅၂၇
သိန်း ၅၀. ထ ၆၈၁၁၆၈
သိန်း ၅၀. ဓ ၆၇၁၆၇၂
သိန်း ၅၀ ပ ၈၈၀၇၆၅
သိန်း ၅၀. ဎ ၈၀၃၅၇၆
ကျပ်သိန်း ၂၀ဆု ( ၁၅ ) ဆု
သိန်း ၂၀. ကခ ၅၃၈၀၃၉
သိန်း ၂၀. န ၃၄၂၀၇၉.
သိန်း ၂၀. ကက ၈၂၇၉၈၃
သိန်း ၂၀. သ ၃၃၅၅၀၆
သိန်း ၂၀. ဟ ၅၃၃၉၇၀
သိန်း ၂၀. ကဂ ၁၉၃၁၃၃
သိန်း ၂၀. အ ၅၃၆၆၀၂
သိန်း ၂၀. ဃ ၂၆၅၅၃၂.
သိန်း ၂၀. ထ ၄၆၆၃၀၅
သိန်း ၂၀. မ ၇၆၇၈၃၄
သိန်း ၂၀. ည ၈၀၉၅၅၄.
သိန်း ၂၀. ဒ ၄၈၆၅၇၁
သိန်း ၂၀. ကင ၆၈၄၉၁၇
သိန်း ၂၀. ဖ ၇၆၁၃၁၃
သိန်း ၂၀. ရ ၅၂၉၀၁၃
ထီဖွင့်ပွဲ ဒုတိယနေ့ ဆုမဲများ
ကျပ် (၁၀) သိန်းဆု (၁၆) ဆု
၁၀ သိန်း ဎ ၉၁၄၁၉၈.
၁၀ သိန်း ဈ ၄၈၂၉၆၃.
၁၀ သိန်း ရ ၃၈၆၄၇၉
၁၀ သိန်း ဌ ၉၆၆၀၃၄
၁၀ သိန်း ကဃ ၁၈၇၃၇၂
၁၀ သိန်း ဓ ၇၀၁၃၃၄
၁၀ သိန်း သ ၃၀၁၅၀၅
၁၀ သိန်း ဇ ၇၄၄၄၅၀
၁၀ သိန်း ဒ ၄၅၂၈၂၃
၁၀ သိန်း န ၁၇၄၅၆၃
၁၀ သိန်း ဓ ၈၂၅၁၂၃
၁၀ သိန်း ကခ ၂၈၇၈၁၆.
၁၀ သိန်း ဗ ၄၄၅၀၇၀
၁၀ သိန်း ဠ ၆၆၉၀၇၀
၁၀ သိန်း ဂ ၉၃၄၉၄၀.
၁၀ သိန်း ဘ ၄၇၈၄၇၃
ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာ (၃) သိန်းဆု